Somaliya Siyaasiyiinta HAG ayeey u afduuban tahay | allsanaag
Somaliya Siyaasiyiinta HAG ayeey u afduuban tahay
Siyaasiyiinta Hawiye, waxay ku fashilmeen inay maamul u sameeyaan degaanada ay ugu badan yihiin tiro ahaan dalka Soomaaliya sida Galmudug, Hirshabeele iyo Banaadir.
Sawirka sare ” Hogaa miyaashii maamul goboleedyada Hirshabeele. Galmudug iyo Banaadir oo Mooryaan koolkoolinaya”
Dastuurkii ay Soomaali ku wada heshiisay oo sheegayey in labo gobol iyo wax ka badan ay maamul wada samaysan karaan, ayaa waxa loo jebiyey si mar qura loo arki lahaa degaanada Odowaa iyo Fiqi ka soo jeedaan oo nidaam dawladeed leh, oo aan la buun buunbuuniyn Mooryaanimo. Gobol iyo Nus ayaa laga dhigay maamul goboleed aan sharci ahayn oo lagu magcaabo Galmudug, ilaa maantana ma laha gole wasiiro. Maamulka labaad waa Hirshabeele oo ay u badan yihiin beesha Hawiye ilaa maantan Isaguna ma laha gole wasiiro iyo nidaam dawladeed
Gobolka sadexaad waa gobolka Banaadir oo ay ku taalay caasimadda Soomaaliya, isugana wuxuu noqday xarunta Alshabaab iyo kawaanka dadka lagu qasho.
Reer Guri Ceel iyo reer Cadaado ayaa ku heshiin waayey inay Dhuusamareeb isku hor fariistaan oo diyaarad u wada raacay Jabuuti si loo dhexdhexaadiyo. waxayna ku soo wada heshiiyeen in maamulkii gobolka iyo nuska ahaa oo aan golaha wasiirada lahayn in xilalaka loo kala qaato madaxweyne iyo Raisuwasaare. Maamulkii gobolka iyo nuska ahaa ayaa markan Raisulwasaare yeeshay.
Ugu danbayntii intaa waxa ka sii daran, siyaasiyiinta Hawiye waxa ka wada dhadhacsan oo iyaga qura iska dhaadhiciyeen in Caruurtii iyo Dumarkii aan hubaysnayn ee 1991 Muqdisho laga soo qaxiyey uu ahaa dagaal ay beesha Daarood kaga guulaysteen. Waana sababta Odowaa, Cabdi Shakuur, Mahad Salaad Fiqi IWM ay u qadan la’yihiin Soomaliya nin daarood ah ayaa madaxweyne ka ah. Sideed sano oo Hawiye madaxweyne Soomaaliya ka ahaa Raisalwasaarayaal ayaa Mooshin laga keenay. Maanta ilaa maalintii Farmaajo xilka qabtay siyaasiyiinta Hawiye Mooshin ayeey wadeen. Golihii wasiirada uu soo magcaabay dadkii dilayna suuqa ayeey joogaan oo kooxdan ayaa ku taageertay inuu sharciga ka weyn yahay oo aabayaashii ku guulaysteen dagaalkii 1991
Fiqi, Odowaa iyo Mahad Salaad marka ayna mooshinka wadin shaqada kale ay qabtaan
← Soomaaliya ma Falastiin Mise Mareeykanka Ayeey Taageertaa? Qudus oo loo Hiiliyey →